Sucuudiga oo sii daayay dumar gaari kexeeyay - BBC News Somali
Sucuudiga oo sii daayay dumar gaari kexeeyay
13 Febraayo 2015
Image caption Lojiyan waxa ay haysataa liisanka Imaaraatka
Wararka ka imaanaya boqrtooyada Sucuudiga waxa ay sheegayaan in laba dumar ah oo u ololeynayay in dumarka ay xaq u leeyihiin inay gawaarida kexeeyaan oo 70 maalin xirnaa la sii daayay. Waxaa warkaasi inuu soo diray tafatiraha wararka carabta ee BBC sebastian usher. Axmed Xaji Xasan ayaa soo jeedinaya………
Lojayan Hathloul waxaa la xiray bishii December, waxaana laga qabtay xuduudda Sucuudiga iyo dalka isutagga Imaaraatka ay wadaagaan, xilligaas oo ay isu diyaarineysay inay jebiso mamnuucidda ah in dumarka Sucuudiga aysan gawaari kexeyn karin.
Waxay qorsheyneysay inay isticmaasho liisanka ama ruqsadeeda dalka isutagga Imaaraatka Carabta.
Waxa ay arrintaasi iyo safarkeeda ku baahisay barta Youtube.
Maysaa al-Camudi, oo ah weriye u dhalatay Sucuudiga, balse ka shaqeysa Imaaraatka Carabta, waxaa la xiray xilli ay dooneysay inay qof ay saaxiibo ahaayeen caawiso.
Waxaa sare u kacayay walaaca laga qabo xaaladdooda kaddib markii la sheegay in kiiskooda lagu dhageysanayo maxkamad ka shaqeysa la dagaallanka argagixisada.
Lojayan waxa ay taageero badan ku leedahay internetka, gaar ahaan dhallinyarada Sucuudiga oo aad u garanaya waxa ay qorto.
Sida ninka wax ku qorayay bogga blogger ee Raif Badawi oo lagu xukumay kun garbaash, kiiska Lojayan waxa uu u muuqday inuu yahay mid aan laga soo dhaweyn Sucuudiga, iyadoo boqorka Cusub ee Salman oo xilka la wareegayo.